Kenya:Siyaasi caan ah oo xoog looga musaafuriyay dalka – idalenews.com
Siyaasi caan ah oo u dhashay dalka Kenya kana mid ah siyaasiyiinta sida weyn mucaaradka ugu ah Dowlada u hogaamiyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mar kale dalkaasi si xoog looga musaafuriyay.
Miguna Miguna oo horey looga qaaday xasaanada Xildhibaano ayaa mar kale si xoog ah diyaarad looga saaray garoonka Diyaaradaha magalaada Nairobi, waxaana loo diiday in gudaha u galo magaalada Nairobi.
Qareenka Siyaasiga aan hadalka la ganban ee Miguna ayaa xaqiijiyay in uu dalka mar kale laga musaafuriyay isaga oo raacay diyaaradda Emirates oo Nairobi ka duulaysay, halkaas oo uu ku xirnaa tan iyo Isniintii.
Maxkamad kutaaka dalka Kenya ayaa amartay in lasii daayo Siyasaiga Miguna loona fasaxo in dalka uu soo galo ,hasa ahaatee dowlada ayaa amarka maxkamada iska indho tirtay dalkana xoog uga saartay siyaasigan mucaaradka ah.
George Odunga oo garsoore ka ah maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha booliiska iyo madaxa waaxda socdaalka in ay amardiido maxkamadeed samayn doonaan haddii aysan sii daynin Miguna.
Dowlada Kenya ayaa siyaasigan horey dalka uga musaafurisay kadib markii uu ka qeyb galay Munaasabadii uu isku caleemo saaray Ra’ila Odinga oo sheegtay in uu yahay Madxaweynaha dalka Kenya.
Siyaasigan oo katirsan Mucaaradka Kenya ayaa horey looga musaafuriyay Kenya waxa uuna ku laabtay dalka Canada uu dhalasho ka heesto, hasa ahaatee Siyaasigan ayaa malamo kahor kusoo laabtay Kenya waxaana lagu xiray garoonka Diyaaradaha.
Kheyre iyo Michael Keating oo kawada hadlay Xaalada Siyaasadeed ee dalka